Cuunfaa Gabaasa Guutuu Torbee kanaa. | QEERROO
Posted on December 1, 2017 by Qeerroo
Sirna mootummaa wayyaanee mormuufi qajeelfama mootummicharraa ba’u mormuudhaan barattoonni mooraa lakkisanii kan ba’an yommuu ta’u, waraanni mootummaa wayyaanee magaalaa keessa deemuudhaan barattoota dararaa akka jiru dhaga’ame. Barattoonni kun uummata magaalattiidhaan simatamanii kan tajaajila barbaachisu kan argatan ta’uyyu haalli jireenya isaanii magaalaa keessatti yaaddessaa ta’uu odeeffannoon arganne ifa godha. Poolisoonni Oromiyaafi korri bittinneessaa magaalaa keessa socho’uudhaan akka barattoonni humna waraanaa wayyaaneen hin qabamne tumsaa akka jiranis maddeen gabaasan.
Fincilli xumura garbummaa magaalaawwan Oromiyaa adda addaa keessatti geggeeffamaa jira.
Mootummaan wayyaanee Warraaqsa Biyyaalessaa FXG kan dhaamsan itti fakkaatullee diddaan ummata Oromoo daran finiinaa jira.Maddeen Oduu Godinoota Oromiyaa gara garaa irraa akka gabaasaa jiranitti mootummaan wayyaanee fi dhaabni isheen ergattu OPDOn akka waan gaaffii Oromoo deebisaa jiranii fakkeessuun shira adda addaa xaxanii, afaaniin ololaa jiraatanis, ummatni olola diinaa dhagahuu diduun falmaa finiinsuu itti fufe.
Keessumaa dargaggootni/Qeerrroonii fi barattootni dhaabbattoota barnootaa olaanoo gara garaa keessa jiran Warraaqsa Biyyaalessaa FXG daran finiinsuu itti fufaniiru.
Yunversitiilee Amboo, Jimmaa, Wallagga, Haromaayaa, Madda Walaabuu fi kanneen hafan hedduu keessatti barattootni Oromoo haga gaaffiin keenya deebii argatutti jechuun sagalee mormii dhageessisuu itti fufaniiru. Yakka waraanni liyyuu haayil wayyaaneen deggeramu ummata Oromoo irratti raawwataa jirus mormuun diddaa jabaa mul’isaa jiru. Waraanni wayyaanee mooraa manneen barnootaa qubsuma waraanaa godhachuu irraas, barattootni hedduun barnoota dhaabanii gara maatii isaaniitti galaa akka jiran ibsameera.
Keessumaa Warraaqsi Biyyaalessaa FXGn Sadaasa 26,2017 irraa qabee Godinoota Oromiyaa Kibba, Baha, Giddugalaa fi Lixa Oromiyaa keessatti haalaan finiinaa jira. Sadaasa 28,2017 magaalaa Harar keessatti Qeerroleen Oromoo Warraaqsa FXG jabaa geggeessuun sirna wayyaanee kan hin barbaadne ta’uu mul’isaniiru. Diinni sochii kana ugguruuf dargaggoota irratti boombii aaraa fi dhukaasa irratti banus falmaa addaan kutuu hin dandeenye. Godinoota Harargee lamaan keessatti Warraaqsi Biyyaalessaa FXGn daran finiinee jira. Adaamaa fi naannoo ishee keessatti warraaqsi akkaan finiinuun itti fufeera. Lixa Wallaggaa Onootaa fi magaalota adda addaa keessatti FXGn belbelaa jira; addatti Begii keessatti falmaan jabaateera; daandii cufuun sochii waraana wayyaanee danquunis itti fufeera.
Humnaan deemuu malee rakkoo siyaasaa biyyattii hudhee qabee jiruuf, furmaata siyaasaa kennuuf kan himilee itti hin qabne sirni wayyaanee/TPLF gaaffii ummataa ammas humna waraanaanan fura abjuu jedhuun guutummaa Oromiyaa keessatti humna waraanaa bifa haaraan bobbaasaa jira. Bakkoota daandiin sochii duraa ugguramettis elekopterootatti dhimma bahee baadiyaalee keessa waraana qubachiisaa jiraachuu maddeen ifa godhu.
Ijibbaatni mootummaan wayyaanee humna waraanaatti rarra’ee bultii yeroo bitachuuf dhama’u tasumaa kan him milkoofnee fi kufaatiin isaa mirkana ta’uu sabboontotni Oromoo hubachiisuun, ummatni Oromoo fi cunqurfamtootni kaanis falmaa sirna wayyaanee irratti finiinsuu akka itti fufan hubachiisu.
“Baalee Roobetti mormiin cimaan gaggeeffamaa oolera.
” Kolleejjiin barsiisota Roobee fi manni barumsaa Alii birraa mormii guddaa irra akka turan dhaga’ame. Barattoonni kunneen haala yeroo Oromiyaa keessa jiru bu’uura godhachuudhaan mormii isaanii geggeessaa oolaniiru. Weerarri liyyuu hayilii somaalee mootummaa wayyaaneen qindaa’ee lubbuu uummata Oromoo gaaga’aa jiruufi qe’eefi qabeenya isaaniirra buqqisee jireenya gadadoo akka jiraatan kan godhe ni balaaleffanna jechuudhaan furmaanni waaraan akka kennamus sagalee isaanii dhageessisaniiru. Akkasumallee tibba kana maqaa COC tiin barattoota dhaabbilee olaanoo jeequun haa dhaabbatu jedhaniiru. Humni waraanaa wayyaanee kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa deddeemee lubbuu ilmaan Oromoo akka malee balleessaa jirus akka dhaabbatu gaaffii isaanii dhiyeeffataniiru.
Walgahii ariifachiisaa university amboo damee awwarootti bulchiinsi Mana barumsichaa waamee ture haala walii galtee HIN qabneen diddaan cimaan isaan quunnamee osoo walii galteen hin ta’in xummurameera
Wal ga’iin kun yaadaafi gaaffii barattootarraa isaan mudate deebisuu dadhabuudhaan walii galtee malee hafeera.
barattoonni amboo university damee awwaroo dantaa mataa isaanii kabachiifachuuf dantaa uummataa Kan sarbuu miira dadhabaan barumsa itti fufuu akka hin qabne ibsaniiru.
ummati keenya nannoo sumaalee qe’ef qabeenya isaarraa buqqa’ee Akka Saba Lammii hin qabneetti dunkkaanni ijjaarameefii adun,bineensaan doorsifama osoo Jiranii miirri barumsaaf nukakaasuu hin jiru jechuudhaan aantummaa uummata ofiif qaban ibaaniiru.
dabalataan shirri mootummaa wayyaanee humna addaan ykn liyyuu polisii waliin ta’un osoo walirra HIN kutin ummata keenya naannoo daangaarraa booranaaf harargee ammas dabalee dhukaasa irratti banaa osoo jiruu barachuu ammas hamilee hin qabnu jedhan.
shira qabsoo barattota oromoo laaffisuuf COC n labsamees YOO Akka qoramnen dabarree nii ramadamna ta’e Kan walii gallu ta’u yoo kana HIN taanee Kan walii HIN Galle ta’u isaa beektani hubachuun amma kun ilaalamee labsamuuti miirri ittin barannu hin qabnu jechuudhaan barattoonni kun imyaadasaanii ibsataniiru.
nutti deemnee leenjii barbaachisu fudhachuun mootummaa nannoo oromiyaa milishaa leenjisaa jiru nus leenjisee Akka ummataafi daangaa keenya eeggannuf nujabeessu qaba jedhuun gaaffii fi yaadaan sardanii, amma Kana HIN taaneeti mooraa dhiisnee ba’a Akka jirru isin beeksisna jedhanii walgaicha xummuraniiru.
“Godina Harargee Bahaa Aanaa Gursumitti Weerarri Liyyuu Poolisiin Sumaalee Itoophiya Ummata Aanaa Gursum Irratti Taasisan Akkuma Itti Fufetti Jira .
Weerara Liyyuu Poolisiin Sumaale Itoophiyaa Guyyaa sadaas 29 Araddaa Kaasaa Oromiya Irratti Gaggeesaniin Namoonni 3 miidhaa cimaaf saaxilamuu maddeen ibsan. Namoonni sadan kunniin,
1. Obbo # Xayyib_Mohammad
2. Obbo # Abduramaahan_Rashid
3. Obbo # Xayyib_Kilaas_Muhmmad kan jedhaman akka ta’e dhaga’ameera. Namoonni kunniin akka malee waan miidhamaniifis yeroo ammaa yaalamuudhaaf gara hospitaala Harar geeffamanii akka jiran odeeffannoon arganne addeesseera.
Kanarraa ka’uudhaan Ummanni Aanaa Gursum Xiqqaa Guddaan Obsa Fixanneera, Diina Keenya Baanee Firraa Dhoorkina, Nu Hidhachisaa Jedhachuun Hiriira Cimaa Gaggeessaa turaniiru. Qaamni isaan waraanaa jiru liyyuu hayilii somaalee qofa utuu hin taane, humna waraanaa wayyaanee makatee akka ta’es ifatti ibsaniiru.
Gidina Booranaa aanaa Taltalleetti sadaasa 29 mormii cimaan geggeeffamaa ooleera.
Hiriira mormii kanarratti dhaadannooleen adda addaa dhaga’amaa oolaniiru. Dhaadannoolee isaanii kana keessatti dhimma daangaa Oromiyaan wal qabatee weerarri liyyuu hayilii somaalee akka dhaabbatu sagalee mormii isaanii dhageessisaniiru. Akkasuma mirgi abbaa biyyummaa Oromoo akka kabajamu jechuudhaan gaaffii isaanii dhiyeessaniiru. Godina Booranaatti qaamni hoggansaa rakkoo qabaachuusaaniitiin komii qaban ibsanii, bulchiinsi godinichaa aangoo akka gadhiisu gaafataniiru. Godinni kun bu’uuraalee misoomaa ga’aa akka hin qabne ibsanii wanti eegalamee karaatti dhaabbate hatattamaan akka xumuramuufis yaada isaanii ibsataniiru.
Barattoonni Yuunivarsitii Amboo Kaampaasii Walisoo akkuma barattoota Yuunivarsitii kanneen biroo gaaffilee dhimma biyyaa fi dhimma keessoo yuunivarsitii isaanii hedduu gaafachaa turanii jiru.
Sababa gaaffin isaan gaafatan kun deebii quubsaa dhabeef erga barnoota adda kutanii bubbulaniiru. Yeroo garagaraa keessatti bulchiinsa yuunivarsitii isaanii waliin marii taasisaa turanis walii galteerra ga’uu hin dandeenye. Gaaffileen adeemsa keessa deebii barbaadan akkuma jiranitti ta’ee kanneen hatattamaan deebii barbaadan dafanii akka deebii itti laatanif bulchiinsa yuunivarsitichaaf gaaffii dhiyeessanii turan. Garuu deebiin quubsaan gaaffii isaanitif kenname tokkollee hin jiru. Daree galtanii barnoota eegaluu baannaan rakkoo isinirra ga’uuf itti gaafatamummaan kan mataa keessaniiti jechuudhaan akeekachiifni barattootatti kennamee ture. Barattoonnis hanga deebii argannutti hin barannu jedhanii didaniiru. Kanumarraa kan ka’e guyyaa sadaasa 28 #barattoota fi # Poolisii Oromiyaa walitti buusuf jecha gaaffii barattoonni gaafatan kana gara kallattii biraatti jijiirudhaan akka waan barattoonni jeequmsaaf wal kakaasaa jiranii fakkeessuun akka poolisoonni dallaatti galanii ijoollee reeban taasisanii jiru. Haa ta’u malee poolisoonni Oromiyaa barattoota muraasa uleedhaan erga rukutanii barattoonni maalif akka barnoota dhaaban erga hubatanii dallaa dhiisanii gara alaatti akka ba’an maddeen nuuf himan. Haga gaaffiin gaafatame deebii argatutti barnoita eegaluu akka hin dandeenyes ibsaniiru.
Godina Baalee aanaa Raayyituutti liyyuu hayiliin Somaalee ajjeechaa itti fufteetti.
Sadaasa 29 waraanni liyyuu hayilii dhokachuudhaan dhukaasa banteen maanguddoo tokkoofi daa’ima waggaa 6 tokko ajjeestee akka deebite maddi odeeffannoo keenyaa eereera. Uummannis gocha kana mufachuudhaan haaloo ba’uuf yaalaa wayita turetti waraanni wayyaanee gidduu seenuun akka dhaabsisetu gabaafame.
Yakka hamaa uummatarratti raawwachuun ittuu jabaatee jira. Summiin uummata Oromoo daguun Waraana Wayyaanee, Ajjeechaa Kaaraa Jijjiirrateen Socho’aa Jirudha.
Lixa Oromiyaa Begii keessatti uummanni balaaleffannaa Sirna wayyaaneerra turuudhaan uummata Oromoo daangaarraa buqqa’aniif dirmannaa taasisaa tureera.
Karaa nagaa ba’ee qabeenya kam utuu hinbarnadeessin harka qullaa sagalee dhageessisaa tureera. Kanaan ammoo Waraanni Wayyaanee hedduu aarii keessa galuun bishaan boonbaatti summii naquun dhagaa’ame. Balaa kanaan akka gabaasa argachaa jirruutti taanan lubbuun ilmaan Oromoof Oromoo gaaga’ama hamaa keessa galaa jira.
Akka gabaasa kanaatti “Yeroo ammaa raayyaan ittisa biyaa begiitti Bishaan boonbaatti qoricha naqanii ijoolleen lama akka miidhamaniifi hedduunis yaalamaa akka jiran odeeffannoon nu gahaa jira.kanaafis jiraattonni beegii hiriira balaaleffannaa guddaa gaggeessaa oolan jabeessanii jiru.” Jechuun sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof ibsan
“Jamaal_Abdoosh kan jedhamu Goonni Oromoo tokko Aagazii hedduu soora allaattii taasisee wareegame.
Goonni kun lola baha Oromiyaa aanaa Gursumitti liyyuu hayilii waliin taasifamerratti gootummaa cimaa agarsiisee akka wareegame odeeffannoon keenya ni ibsa. Gaara Mullataatti kan dhalate goonni kun, qeerroo Gursum dura hiriiree waraana wayyaaneetti dhukaasuudhaan agaazii 5 ajjeesuun boodarra akka ofiis wareegametu ibsame.
Dhumarratti, qabsaa’aan Ormoo Falmataa Urgeessaa du’aan addunyaa kanarraa boqote.
Falmataan goota lammiif gaachanaa rakkatees harka hin laannee dararaa mana hidhaaf alaatti wayyaneen gidirfamaa kan ture qabsa’a Falmataa Urgeessaa kan dhalate magalaa shaambuu ganda 02 naannoo mana barumssa Elementeri shaambuu fuulduratti bara 1976 dhalate.bara 1982 mana barumssa shaambuu sadarka 1ffaa Eemeterii 1_7 achuuma shaambuutti barate bara 1994 qormata biyyoolleessa kutaa 12ffaa fudhachuuf qormaataaf seenee tikni wayyaanee qabdee hidhuuf yeeroo mana barumsa seente itti marsitu karaa fodda bahuun jalaa akka miliqe seenaan jalewwansa qabsoo yeeroo sana ni himu.guyyaa Falmataan Urgeessa kara fodda ba’ee badee obbolessisa Darajjee Urgeessa bakka isaa qabamee yeeroo hidhamu Falmataan dhufee haraka kennate obbolessa isa mana hidhatii baasee wagaa 1f ji’a jaha gaafii tokko malee mana hidhatti darara hamaaf reebicha gara maleen darara hama keessa akka ture hiriyoonniif maatiin isaa ifa godhuu. Falmataa Urgeessa wa’ee oromoof oromiyaaf jeecha dhiibbaan kara wayyaaneef jala deemtoota ishee wan itti baaya’ateef shaambuurra baqatee gara finfinnetti dhoksaan jiraacha akka ture seenaansa ni dubbata. finfinne qofaa oso hin taane oromiyaa keessa bakka garagaraatti baqate jiracha kan ture yoo ta’u bara 1997 wayyaaneen midiyaaf Gaazixaadhaan labsitee akka inni qabamuuf barbaada akka turtes seenaan goota kana ni dubbata.Falmataa ykn Zarhuun du’us seenaansa bara hanga barabaratti ni jiraata. Boollasaa daadhiin haa guutu jechaa, jaallan qabsoofi firoota isaaf jajjabina hawwina.